Ciidamada Booliska Oo Gacanta Ku Soo Dhigay Nin Maanta Dil Ka Gaystay Laascaanood | Marsa News
Ciidamada Booliska Oo Gacanta Ku Soo Dhigay Nin Maanta Dil Ka Gaystay Laascaanood
April 17, 2020 - Written by editor marsan
Hargeisa:(Marsanews) Ciidamadda booliska gobolka Sool ayaa ku guulaystay in ay gacanta ku soo dhigaan nin maanta magaaladda Laascaanood ku dilay nin kale oo shacab ahaa.Sida uu noo xaqiijiyay badhasaabka gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiidhe, oo caawa khadka telefoonka ugu waramay wargeyska DAWAN. Kaasoo ay ciidamadu soo qabteen isagoo magaaladda ka dhinaca Koonfureed uga sii baxayay.
Waxaanay ciidamadda booliska Laascaanood kadib markii dilku dhacay ay qaadeen hawl-gal balaadhan oo lagu soo qabanayo ninka dilka gaystay. Iyadoo badhasaabka laftiisu hogaaminayay hawl-galkii ninkaasi lagu soo qabtay.
C/qani Maxamuud Jiidhe, oo faahfaahin ka bixinayay sidii dilkaasi u dhacay waxa uu yidhi, “Saaka barqadii, markay saacadu ahayd 11-kii iyo afartan daqiiqo, ayaa nin ka mida dadka Laascaanood ku nool, waxa uu magaaladda Laascaanood ku dilay (Toogtay) nin kaloo shacab ahaa. Kadib markii dilku dhacay, waan ka hawl-galnay, ninkii dilka gaystayna waan soo qabanay”.
“Kowdii duhurnimo ee isla maanta ayaan soo qabanay gacan ku Dhiig lihii. Dhinaca Koonfureed ee magaaladda Laascaanood ayaan ka soo qabanay.
Waanan ku soo guulaysanay in aan soo qabano ninkaasi. Ciidamadda bilayska iyo anigoo hawl-galka watay, oo ciidanka bilayska la socday. Sharciga ayaana la hor gayn doonaa gacan ku dhiig laha, mar haddii la qabtay”ayuu yidhi badhasaabka Sool.
Geesta kale badhasaabka Sool waxa uu sheegay in dilkaasi uu la xidhiidho Aanno qabiil, taasoo ah arrin inta badan ka dhex dhacda bulshadda.
Waxaanu yidhi, “Sababta dilka keentay, baadhis ayaa weli ku socota. Laakiin, waxaa loo sheegayaa in ay la xidhiidho Aanno qabiil, ama Aarsi, ayuu ninkaasi, ninkaa kale u dilay. Waanay dhacaan, inta bada-na way soo noq-noqdaan in had iyo jeer Aanno qabiil la isku dilo.
Muhiimadu waxay, sida wax looga qabto iyo qaabka looga hawl-gallo. Aniga ayaana hogaaminayay, hawl-galkaasi, oo ciidamadda booliska la socday, markii ninkaa la soo qabanayay”.
Dhinaca kale badhasaabka ayaa u mahad celiyay ciidamadii ku soo guulaystay soo qabashadda ninkaa dilka gaystay, gaar ahaana taliyaha qaybta booliska Sool, taliye ku-xigeenka iyo ciidamadaba.
Waxaanu yidhi, “Waxaan u mahad celinayaa cid kastoo nagala qayb qaadatay hawl-galkaasi. Gaar ahaana ciidamadda bilayska, oo tallaabo wanaagsan ka qaaday hawshaasi, oo la’antood aanay suurto gasheen”.
“Waana ciidan xoogan runtii, ciidamadda bilayska ee gobolka Sool ku sugan. Taliyaha cusub ee qaybta booliska gobolka Sool, oo dhawaan xilka la wareegay, oo shaqo wanaagsan qabtay, oo magaciisa la yidhaaho Maxamed Saleebaan Gooni.
Taliye ku-xigeenka qaybta booliska Sool, oo isna hawl-galkii maanta igu weheliyay, iyo hawl-gelinta, dhamaanba waan u mahad celinayaa ciidamadda bilayska. Shaqo wanaagsan ayay qabteen, waanay mahadsan yihiin”ayuu yidhi badhasaabka Sool.